यी महिलाले ठेक्का हत्याउन मन्त्रीसँग नै लसपस गरेको यसरी खुल्यो ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी महिलाले ठेक्का हत्याउन मन्त्रीसँग नै लसपस गरेको यसरी खुल्यो !
ठेक्का पाउन, जागिर या कतै नियुक्ति पाउन एकदमै गाह्रो छ । अझ नेपालजस्तो बिकासशील मुलुकमा त कुनै मन्त्री या नेता चिनेको छैन भने कुनै सरकारी काम बन्दैन भनेपनि हुन्छ । सरकारले दिने लाखौंका ठेक्कामा त मिलेमतो हुने समाचार आइ नै रहेका हुन्छन् ।
यस्तै एक महिला छिन्, जो आफ्नो सरीर देखाएर करोडौको टेण्डर हात पर्छिन् । उनले आफै के खुलासा गरेकी छिन् भने टेण्डर हात पार्न मन्त्रि देखी सेक्युरिटीसँग पनि लसपस गरेकी छिन् त्यो पनि एकै दिन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हेर्दा निकै सुन्दर देखिने ति महिलाले यस्तै कारणबाट धेरै सरकारी ठेक्काहरु हात पारेकी छिन् ।तीन बर्ष अघि समय एक सोलार कम्पनीको ठेक्कामा अनियमीतता भएको रहस्य खुलेपछि अहिले यो बिषय निकै चर्चाको बिषय बनेको छ । घटना हो भारतको केरलाको ।
केरलाकी सरिता नायरले आफुले ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न त्यस समयका मुख्यमन्त्रि ओमन चाडीको कुर्सिनै ध रा प मा परेको थियो ।त्यसताका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भनेका थिए ‘सरीताको अर्को नाम सोलार सरिता हो ,सोलारले जस्तै उनले पनि तताउने काम गर्छिन् । ३६ बर्षिया सरिता नायर यसै कारणले सरकार ढा ल्ने सम्मको हैसियत राख्ने भन्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले चर्चा गरेका थिए ।
उनी कुनै समयको कक्षा १० को टपर बिद्यार्थी हुन । चेनगन्नुर स्थित एक सरकारी स्कुलमा पढेकी सरीताका बारेमा उनका एक शिक्षकले भनेका थिए ‘सरिता धेरै चलाख बिद्यार्थी हो, उसले कक्षा १० सम्म हरेक कक्षाका सबै बिषयमा ९० प्रतिसत अंक ल्याएकी थिइन् ।
उनलाई अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम आदि बिभिन्न भाषाहरुको राम्रो ज्ञान छ । सरिताको बिवाह दुबईका एक युवक सँग भएको थियो । बिवाह पश्चात रोजगारीको शिलशिलामा उनका पति खाडी मुलुक गए ।